Nosy Cayman: fampisehoana manondro fitomboan'ny fizahan-tany maharitra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nosy Cayman: fampisehoana manondro fitomboan'ny fizahan-tany maharitra
Ny fitsidihana Stayover dia nitombo hatrany ho an'ny Cayman Islands tamin'ny volana oktobra niaraka tamina olona 23,798, fiakarana 5.76%, na mpitsidika 1,297 2018 mihoatra ny Oktobra XNUMX.
Nandritra ny volana Janoary ka hatramin'ny Oktobra 2019, ny mpitsidika dia niarahaba ireo mpitsidika stolover 410,088, izay maneho fitomboana 10.00% nandritra ny vanim-potoana nitondrana ny taona 2018, na fitomboan'ny mpitsangatsangana 37,276. Ity tarehimarika ity dia nihoatra ny volana janoary hatramin'ny oktobra ny antontan'isa momba ny taona lasa izay voarakitra, zava-bita izay manohana ny iray amin'ireo tanjon'ny iraky ny fizahan-tany ataon'ny governemanta handrisihana ny toekaren'ny nosy Cayman. Tombanana fa ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika dia nitombo 7.4% ka hatramin'ny $ 747.4 tapitrisa US nandritra io vanim-potoana io.
"Manamafy indray ny maheno mivantana ny fiatraikany tsara ateraky ny paikadin-tsika amin'ny fampiroboroboana ny tombom-bolan'ny orinasam-pizahan-tany mandritra ny fotoana heverinay ho vanim-potoana nentim-paharazana", hoy ny fanehoan-kevitry ny minisitry ny fizahantany, Hon Moses Kirkconnell. "Ny Ministera dia niorina mafy tamin'ny fanolorany tena ho an'ny sehatra misy antsika sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny mba hamoronana fotoana bebe kokoa amin'ny fandraharahana, fiofanana ary fampandrosoana ho an'ireo liana amin'ny fizahan-tany fizahan-tany, ezaka izay miankina betsaka amin'ny fahatongavan-drivotra hitazonana modely orinasa mahomby. Manohana mafy ny asan'ny departemantan'ny fizahantany ny governemanta mba hanatsarana ny fitsidihana sy ny fahafantarana ny Nosy Cayman manerantany mba hahazoana antoka fa manararaotra ny fahafaha-manao izay misy akony tsara eo amin'ny sehatry ny asa sy ny orinasa eto amin'ity tsena ity izahay. ”
Ny fanolorana ny angon-drakitra statistika isam-bolana dia anjara birikin'ny DOT, izay ny iraka fikarohana dia ny hanohana ny tanjona stratejika ankapobeny amin'ny toerana amin'ny alàlan'ny fanomezana angon-drakitra azo antoka, sy ny fanadihadiana ary ny fandaminana ny ho avy, ny fandraisana fanapahan-kevitra ary ny famolavolana politika. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiakarana an-tsary ny vokatra mifandraika amin'ny fikarohana natao ho an'ny besinimaro. Amin'izao fotoana izao, ny DOT dia manome angon-drakitra statistika an-tserasera amin'ny endrika mora ampiasaina ho an'ireo olona mitaky tarehimarika mifandraika amin'ny fizahantany. Ny fanampim-panazavana farany momba ny tatitra fikarohana natolotra dia sary an-tsary sivy volana 2019 izay azo jerena amin'ny Internet ao amin'ny tranokala Ofisialy Cayman Islands.
Andro sy zotra ratsy indrindra hisidinana amin'ny faran'ny herinandro Thanksgiving
Ny solontenan'ny Etazonia dia mitaky valiny avy amin'ny CEO CEO Airbnb
CDC dia manome ny laharam-pitaterana ratsy indrindra any Guam
30 minitra lasa izay
Miomana amin'ny dia iraisam-pirenena i Sina